Hooyaday ayaa ii diiday in aan gurigeyga ku dhex raaxeeysto, banaanka ayaa ku - iftineducation.com
iftineducation.com – Warar ayaa sheegaya in nin Mareykan madow ahi uu qaati ka istaagay hooyadii isaga dhashay kadib markii ay u diiday inuu guriga sexy iyo raaxeeysi isaga naftiisa isku sameeyo.
Ninkani ayaa hooyadiis ku dhaleeceeyay in ay ka soo horjeedo in uu fiirsado filimaanta sexi-ga. Waxaana uu u baxay banaanka isagoo qaawan oo aan hal baro xataa gacanta ku wadan.
Nin baabuur wadada ku marayey ayaa arkay Anthony Smith oo intuu isqaawiye korkiisa ku raaxeysanaya, isagoo qaawan iska raadinaya galmood. Ninkaani ayaa kolkaas jardiin xaafadooda ku dhow ku sugnaa. Dadkii goobta marayey ayaa booliska u yeeray kuna wargeliyey in nin qaawan uu meel banaan ah isagoo qaawan xubnihiisa ruxayo.
Booliska ayaa markiiba soo aadey dhanka ninkii Anthony ahaa iyagoo ku eedeeyay in uu banaanka soo dhigay xubnihiisa taranka isagoo ka rajeynaya dadka xaafada in ay arkaan xubnaha jirkiisa. Anthony ayaa ku cataabay “Hooyadeey ayaa ii diiday in aan guriga dhexdiisa ku fiirsado filimada Pornogaraaph-ka oo aan ku raaxeeysto..” “Maxeey iga rabtaa hooyo… waan iska siigeeysanayey, banaanka ayey ii soo tuurtay ka waran…?! intaas markii uu yiri ayaa boolisku jeebbad ku dhifteen waxaana ay u hogaamiyeen dhankaasi iyo daarta sharciga (Maxkamadda degmada) Stuart, Florida, USA.
Waxaa maxkamada lagu wargeliyey in Anthony Smith uu damac ka galay in uu banaanka ku raaxeeysto isagoo siigeeysanaya, isla markaana xubintiisa taranka soo bandhigay, waxaa sidoo kale loo sheegay in uu rabey in uu qal-qal geliyo dadka xaafadda degan. Maxmadda ayaa ku xukunta sharciga in uu si bareer ah keligiis isugu raaxeeynayey goob dadweynaha ka dhaxeysa isla markaana uu banaanka soo dhigeyy xubintiisa taranka,